दिनमा कति कप कफी पिउनु उपयुक्त? « Kakharaa
दिनमा कति कप कफी पिउनु उपयुक्त?
२९ पुस, काठमाडौं । जाडो महिनामा तातो–तातो कफी पिउनुको मज्जै बेग्ला हुन्छ । अझ कतिपय व्यक्तिहरु त कफीको सौखिन नै हुन्छन् । विशेष गरी युवाहरुमा यसको क्रेज बढी देखिन्छ। एउटा हातले चुरोट च्यापेर हातमा कफीको चुस्की लगाउनुको मज्जै छुट्टै हुन्छ ।
तर कफी धेरै मान पर्छ भन्दैमा धेरै कफी पिउन नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । विज्ञका अनुसार एक दिनमा चार कप भन्दा धेरै कफी पिउनु हुँदैन । धेरै कफी पिउँदा निन्द्रामा समस्या देखिने उनीहरुको बुझाई छ । कफी धेरै पिउनाले निद्रामा समस्या आनुका साथै मानसिक तथा शारीरिक समस्या पनि बढाउन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
कफीले मानिसलाई डर पैदा गर्ने र मुटुको धड्कन रोक्ने सम्भावना बढाइदिने काम गर्छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका अनुसार कफी धेरै पिउदा स्वास्थ्यका लागि खतरा हुने बताएका छन् । धेरै जसो कफी पारखीलाई कस्तो कफीमा कति कफिनको मात्रा हुन्छ, थाहा हुँदैन ।
उनीहरुले कति कति कफिन लिइरहेका छन् भन्ने कुराको पत्तो हुँदैन । यसरी थाहै नपाइ कफी पिउँदा उनीहरुले आवश्यकता भन्दा बढी कफिन खाइरहेका हुन्छन् । कफिनको अत्यधिक सेवनले गर्भपतनको सम्भावना बढी हुने हुँदा गर्भवती महिलाले दिनमा दुई कपभन्दा बढी कफी सेवन गर्न नहुने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
चिकित्सकका अनुसार धेरै कफीको प्रयोग गर्नले जन्मिने शिशुको वजन कम हुनुका साथै शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।